China Tactical Vest fekitari uye bhizimisi | Feiqing
hevy basa sandbag
tambo yekurovedza muviri
Tactical laser-yakatemwa ndiro yekutakura vesti inogadzirwa ne600D oxford BA. Inogara uye yakagadzikana, yakasimba tensile simba uye kupfeka kuramba.Plate Carrier Vest yakasarudzika yakasarudzika kupa muridzi wehuwandu hwakawanda hwekufamba nehuremu hwekunzwa uye hwakakwana mweya kufema. Kusiyana nezvimwe zvipfeko zvakaenzana zvine huremu kana majaketi epaketi muindasitiri, iyo Tactical Weight Vest inogona kubata epakati nepakakura mahwendefa eballistic-kumberi nekumashure-pasina iyo inovharidzira kuwanda. Yoko mapfudzi mapedhi anoderedza kukakavara, anogadziridzwa eyakaenzana mabhendi anovandudza kugadzikana, uye hunyanzvi hwekuyerera kwemhepo chiteshi uye eerospace mesh inovimbisa kutsigira kugadzikana.Tactical vest inokurumidza kuvhura / kudzima neinogadziriswa saizi, bhanhire repafudzi rinogona kugadziridzwa, uye chiuno chechiuno chinogona kugadziridzwa. Yekudzidzira vesti inoshandiswa zvakanyanya mukudzidziswa kweairsoft paintball, iyo moto wepasi moto, kupona, kutsvaga, kununura, CS, kudzika musasa, kuvhima, mitambo uye zvimwe zviitiko zvekunze.
Iyo Plate Inotakura Vest inorema ingangoita 1.48kg pachayo, uye inogona kurairwa sechikamu chepakeji ine seti yemahwendefa anoenderana - kusanganisira sarudzo yako yekutanga Vest Plates: 3.75lb, 5.75lb, 8.75lb, kana iwe unogona ese mahuremu ehuremu anouya neyakagadzikana Hardware, laser-cut micro-loop web chikuva, uye yakawedzera dhonza mubato uye inokurumidza kuburitsa system.
Inobviswa anti-slip padded pamafudzi mapedhi ane hokoreti uye zvishongedzo zvehungwe. Iyo yepamusoro-yepamusoro yakakoshwa mesh yemukati mirairi inobvumira iyo anti-slip bhanhire tambo kuti ikupe iwe kwakanyanya kunyaradzwa.
1.Plate yekutakura vesti inogadzirwa ne600D oxford BA.
2.Color: navy bhuruu, dema, girini, tani, typhon, CP nhema, multicam tropic, grey, CP
3.Vest uremu ingangoita 1.48 yayo.
4.Can rongedza zvakajairwa Laser-cheka ndiro: 3.75lb, 5.75lb, 8.75lb
5.Do rabha Logo chero qty.
6.Package: 1pc / bhegi repurasitiki, 10pcs / katoni: 62 * 55 * 30cm
Pashure: Yakakwirira temp bhamba bhamba
Zvadaro: Kuramba bhendi
Kurema Plate Vest
Chamupupuri Strongman Sandbags
Strongman rinorema basa sandbags
Bata Strongman sandbag
Rabha uremu ndiro
Adress:704 jinwan chivakwa, huanghai 3road, donggang, rizhao guta, shandong